01/02/2018 - Page 3 sur 4 -
Vonoan’olona feno habibiana : Zazavavy 10 taona maty norasarasaina
Zazavavy vao 10 taona monja no hita faty tany anaty ala omaly, rehefa niharan’ny herisetra sy vono tamin’ny fomba feno habibiana. Tany Ambato Boeny tsy lavitry ny fonja no nisehoan’ity vonoan’olona mahatsiravina ity. Rehefa natao …Tohiny
Ady amin’ny cybercriminalité : Hohamafisina ny paikady efa napetraky ny polisy
Tafiditra ao anatin’ny andraikitra sahanin’ny eo anivon’ny polisim-pirenena ny ady amin’ny cybercriminalité. Nambaran’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, Andrianisa Mamy Jean Jacques fa hohamafisina tahaka ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana izany amin’ity taona 2018 ity. Toa izao …Tohiny
Nisy fahatarana teo amin’ny telo herinandro mahery kely teo ny asa fanamboarana ny tobim-piantsonan’ny taksiborosy etsy Ambohimangakely (By-Pass). Voalaza fa vokatry ny fandalovan’ny rivodoza AVA farany teo no nampihatoana ny asa. Na izany aza anefa, …Tohiny